Uxolo Nokuzola Kwi-Tuscan Hill Top Discover - I-Airbnb
Uxolo Nokuzola Kwi-Tuscan Hill Top Discover
IGioviano yidolophana encinci yakudala ekwiikhilomitha eziyi-25 ukusuka kwisixeko esineendonga saseLucca eGarfagnana.
Le ndlu ipholile ibe isembindini wale lali intle yaseTuscan, ukuba ufuna ukubuka le ngingqi yindawo entle onokuzikhuphela kuyo impela-veki okanye ngaphezulu. Sishiyekelwe yimizuzu eyi-50 ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya iPisa kwindlela ye-SS12. Indawo ekuyo ilungele ihlobo okanye ubusika. Ehlotyeni unokufikelela elwandle, ebusika ekhephini kwiinduli. Unyaka wonke ungabuka le ngingqi ngeenyawo, ngebhayisekile, ngesithuthuthu okanye ngemoto.
Le yindlu encinci kodwa etofotofo kwigumbi lokulala elinye kwiiTuscan Hills. Indlu inekhitshi elipheleleyo, igumbi lokuhlambela elineshawa (ayikho ibhafu).
Le lali kunye nendlu yindlu eqhelekileyo yaseTuscan enomlilo ovuliweyo kunye nemibhiyozo yelali unyaka wonke. Wedo ayinikezeli ngeenkuni, singakunceda ukuba uyisuse ekuhlaleni.
Kukho i-wifi, i-dvd kunye neTV. Kukho indawo yokuhlamba impahla yasekuhlaleni, andikhange ndiwufake umatshini wokuhlamba impahla.
Eli yayilikhaya lam kangangeminyaka eyi-5, liye lalungiswa ngokupheleleyo ukuze kuvunyelwe iholide. Uza kuvuya kakhulu apha. Ngoku ndihlala eLucca ngoko ndingaqhagamshelana nawe ukuba kuyimfuneko okanye ukuba ufuna nayiphi na inkcazelo, ndinezaphulelo kwiivenkile zokutyela ezintle zasekuhlaleni endisaziyo ukuba uza kuzonwabela.
Unobuhlobo, ngokuqhelekileyo ungumTaliyane, wamkelekile. Thula ngokubona iindawo ezintle.
Ungaqhagamshelana nam 24/7 ngexesha lokuhlala kwakho.